रेल मा युरोपेली विशेषताहरू3सप्ताह | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > रेल मा युरोपेली विशेषताहरू3सप्ताह
एक quintessential यात्रा यात्रा रेल द्वारा युरोप यात्रा हो. यसलाई छिटो रुचाइएको बन्ने छ पर्यावरण-मैत्री यात्रा विधि. यात्रा, सार मा, मात्र हाम्रो क्षितिज broadens तर हाम्रो दृष्टिकोण broadens. सेन्ट विचार. अगस्टिनको prolific शब्दहरू, "विश्व पुस्तक छ र भन्ने छैन यात्रा ती, केवल एक पृष्ठ "पढ्न.
यो प्रविधी-व्यावहारिक ज्ञानयुक्त मा, डिजिटल युग कनेक्शन छिटो र उग्र छ. यसको लाभ सबै, हामी यात्रा र जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग संग जडान गुमाए, वर्तमान क्षण. रेल युरोप प्रेरित मार्फत यात्रा, सहज र रोमान्टिक छन्.
एक देशमा बाँच्न नगर्ने हामी ती लागि जहाँ रेल यात्रा प्रमुख छ, यो एक रहस्यमय साहसिक हुन सक्छ. युरोपेली रेल यात्रा को अर्को ठूलो perk छ, विपरीत विमानस्थलको, युरोपेली रेल स्टेशन सहर को बीचमा सही स्थित हो. यो हाम्रो सूक्ष्मता रूपबाट यात्रा बजेट को लागत अनावश्यक कटौती.
युरोप मार्फत एक रेल छानेर, हामी मात्र होइन हामीलाई संलग्न तर हामीलाई धेरै हामी सामान्यतया हुनेछ भन्दा हेर्न अनुमति दिन्छ कि यात्रा को एक माध्यम छनौट छन्. एक यस्तो मार्ग अप बाह्र मुख्य युरोपेली विशेषताहरू खुल्छ र बारेमा गरिन्छ3सप्ताह. यात्रा कसरी युरोपेली विशेषताहरू रेल मा पत्ता लगाउन पढ्न3सप्ताह.
रेल दिन युरोपेली विशेषताहरू 1: भियना, अस्ट्रिया
युरोप यात्रा मार्फत रेल भियना मा सुरु, अस्ट्रिया को राजधानी शहर. साहसिक पर्खिरहेका दुई महिमित दिन. बारोक streetscapes र इम्पेरियल महलों कलात्मक प्रदर्शन गर्न टोन सेट, वास्तु, सांस्कृतिक, र संगीतको उत्कृष्ट कृति. यो यसको ईर्ष्या गरे कफी-घर संस्कृति र जीवंत डिजाइन दृश्य सँगसँगै छ.
mumok एक भियना हुँदा अवश्य-के छ. यसलाई आफ्नो अग्र-दल लागि जानिन्छ र कहिलेकाहीं कलात्मक सिर्जनाहरू निम्न स्तरका, जो पाब्लो पिकासो र एन्डी वरहोल द्वारा काम समावेश. आफ्नो संपूर्णता मा संग्रह लगभग हुन्छन् 10,000 कलात्मक Delights.
दिन 2: सल्जबर्ग, अस्ट्रिया
युरोप मार्फत तपाईंको रेल जारी, अस्ट्रिया गरेको सल्जबर्ग शहर मा एक दिन खर्च. यो जर्मनी को सीमा मा छ र छ शानदार दृश्य पूर्वी आल्प्स को. साल्जबर्ग को प्रसिद्धि को दाबी एक कथा-किताब शहर हो कि एक पटक संसारको सबैभन्दा ठूलो संगीतकार को घर थियो, Mozart.
पहाडलाई सल्जबर्ग जीवित छन्. यसलाई एक पटक अत्यधिक प्रशंसित लागि फिलिम स्थान रूपमा प्रयोग भएको थियो, “संगीतको ध्वनि” र त्यहाँ कलात्मक रचना को एक स्पष्ट भावना छ. यो पनि एक शान्त Serenity exudes.
युरोपेली विशेषताहरू दिन 3: म्यूनिख, जर्मनी
युरोप मार्फत एक रेल मा अर्को दुई रोक्दछ जर्मनी म्यूनिख र श्टुटगार्ट छन्. यी प्रसिद्ध गन्तव्यहरू प्रत्येक एक दिन खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो हुनेछ.
म्यूनिख र यसका बभेरिया विरासतहरू छन् जहाँ बियर र पेय पदार्थ परम्पराले तिनीहरूको संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाएको छ, लगभग सात शताब्दीयौंदेखि. को Oktoberfest म्यूनिख सूची को शीर्ष मा छ. यो लाखौं मानिसहरू द्वारा मनाइन्छ भन्ने विश्व भर देखि यात्रा, को पर्वहरू मा भाग गर्न.
दिन 4: श्टुटगार्ट, जर्मनी
श्टुटगार्ट एक सुरुचिपूर्ण महसूस छ, आधुनिक जीवनको एउटा माहोल जहाँ छिटो कार र फैंसी रेस्टुरेन्ट सिर्जना तर त्यहाँ बस आधुनिक भन्दा श्टुटगार्ट थप छ. श्टुटगार्ट एक राखे-फिर्ता देखाउँछ कि रक्सी taverns र छाती-नट छायांकित बियर उद्यानमा छ, उल्टो आफ्नो खुट्टा बर्खास्त.
श्टुटगार्ट गाडिहरु गर्न म्यूनिख
श्टुटगार्ट गर्न फ्रैंकफर्ट
हीडलबर्ग श्टुटगार्ट गाडिहरु गर्न
युरोपेली विशेषताहरू दिन 5: स्ट्रासबर्ग, फ्रान्स
रेल मा फिर्ता Hopping, यो फ्रान्स बन्द छ! स्ट्रासबर्ग मा एक दिन खर्च.
स्ट्रासबर्ग एक मध्ययुगीन भूत र एक प्रगतिशील भविष्य बीच शेष. यसको गोथिक गिरजाघर छ एक वास्तुकला आश्चर्य र पुरानो शहरको घुमाउने गल्लीहरूमा रोमि and गर्ने र मधुमेह भोजनको मजा लिनको लागि सिफारिश गरिएको छ.
दिन6– 8: पेरिस, फ्रान्स
पेरिस एफिल टावर सहित यसको प्रतिष्ठित संरचनासँग सानो परिचय आवश्यक छ, चाप डी ट्रायोम्फे, र नोट्रे डेम कैथेड्रल. पेरिसियन शब्द शैली संग र राम्रो कारण लागि पर्याय छ. आशा विश्व-वर्ग भोजन, किनमेल, र ग्यालरीमा जो प्रेरणा र परम आनन्द को एक कहिल्यै-अन्त्य स्रोत हो. युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रेल यात्राको सधैं यो प्रसिद्ध शहर समावेश गरिनेछ.
युरोपेली विशेषताहरू दिन9& 10: ब्रसेल्स, बेल्जियम
एक पटक पेरिस रोमान्स संग wooed छ, ब्रसेल्स मा अर्को दुई दिन खर्च, अर्को रेल खुट्टा अघि. ब्रसेल्स मा दुई दिन कला डेको FACADES समावेश र महान् महल वर्ग भ्रमण हुनेछ. यो शहर को दिल मा स्थित गर्नुपर्छ, जहाँ 17th शताब्दीको पछिल्लो जीवन आउँछ.
दिन 11 – 13: एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
एम्स्टर्डम ऐतिहासिक नहरहरुमा साथ क्रूज जहाँ छ, जो साधारण छ, र टहलने संग्रहालयहरु मार्फत र पुराना-भरिएको पसलहरूमा. पिउने, भोजन, र डिजाइन दृश्य मोहित र मनोरन्जन. एम्स्टर्डम आश्चर्य को एक शहर हो र भ्यान Gogh संग्रहालय घर साथै प्रदर्शनमा अन्य सम्पत्तिहरू को होस्ट छ.
युरोपेली विशेषताहरू दिन 14 – 17: ब्रेमेन & बर्लिन, जर्मनी
ब्रेमेन मा युरोप मार्फत जर्मनी टाउको फिर्ता र रेल मा पाँच दिन खर्च, बर्लिन, र ड्रेस्डेन. ब्रेमेन लागि एक दिन (तलको चित्रमा), यस्तो ब्रेमेन प्रवासी संग्रहालय रूपमा यसको धेरै संग्रहालयहरु र ग्यालरीमा गएर. यो एक बंदरगाह शहर हो, ताजा समुद्री खाना जहाँ आनन्द र एक आकर्षक बन्दरगाह इतिहास सिक्न ब्रेमर्हाभेन छ.
बर्लिन विसर्जन तीन दिन आवश्यक हुनेछ. बर्लिन हुनुको लागि एक प्रतिष्ठा छ “सहर जुन कहिल्यै सुत्दैन”. यसको vibrancy फाइदा लिन! रात revelry लागि हो र दिन सांस्कृतिक कुराहरूलाई लागि हो.
दिन 18: ड्रेस्डेन, जर्मनी
ड्रेस्डेन एक दिन मात्र आवश्यक, यसको ग्रैंड डोम र यसको भर्साइल्लेज-प्रेरित Zwinger दरबार घरहरू संग्रहालयहरु रूपमा Marvel. शहर मा स्थापित भएको थियो 1743 र विश्व युद्ध पछि पुनर्निर्माण गर्न थियो 2. को Elbe को यो उपनाम गरिएको छ 'फ्लोरेन्स’ यसको सुखद स्थान धन्यवाद.
युरोपेली विशेषताहरू दिन 19 – 21: प्राग, चेक गणतन्त्र
युरोप मा रेल यात्रा प्राग समाप्त, आश्चर्य को एक whirlwind पछि. प्राग spiers शहर छ र अक्सर पेरिस को सौन्दर्य तुलना गरिएको छ. यो पनि युरोप गरेको सर्वश्रेष्ठ बियर गर्न हुनुको घर रूपमा वर्णन गर्नुपर्छ. एक को अमरीकी आनन्द 14th शताब्दीमा ढुङ्गा पुल, पहाडको किल्ला, र अल्छी नदी. यो युरोप मार्फत एक रेल यात्रा समाप्त गर्न सही तरिका हो.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो रेल यात्राको पक्का आराम गर्दै छन् बनाउन र विश्राम हुनेछ. बाटो साथ दृश्यहरु मोल, रेल द्वारा यात्रा को सुरक्षा, र सकेसम्म धेरै ठाउँहरूमा निचोल्दै. त्यहाँ यात्रा गर्न कुनै राम्रो तरिका हो. सँग पुस्तक एक ट्रेन सेव आज!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “रेल मा युरोपेली विशेषताहरू3सप्ताह” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/european-hightlights-by-train/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्छन् / tr गर्न / डी वा / ES र अधिक भाषा.
#traveleurope इकोफ्रेंडली ट्रवेल यूरोपियन हाइलाइटहरू europetravel रेल यात्रा